Mawduucyada Philip Kushmaro Martech Zone |
Maqaallada by Philip Kushmaro
Philip Kushmaro, Hawlgallada VP ee Darajo, wuxuu ku dhashay Kanada aabihii Commodore 64 Guru iyo aabe neceb wax kasta oo dijitaal ah, taas oo u xuubsiibtay qof aan jeclayn oo kaliya wax kasta oo dijitaal ah laakiin jecel inuu sharaxo. Isagu waa injineernimada softiweer, xirfadle IT ah oo Microsoft aqoonsan yahay, maamule websaydh iyo waxyaabo kale oo badan. Wuxuu maalin go'aansaday inuu uga tago dhammaan si uu u ballaariyo dhiniciisa hal-abuurka. Wax ka qorida waxyaabaha uu neceb yahay sameynta waxay noqdeen wax ka badan hiwaayad. Marka uusan wax ku qorin ama uusan sameyneynin waxa uu u qabanayo shaqada, waxaad ka heli kartaa tababarka jimicsiga ee MMA iyo Brazilian Jiu Jitsu.
Sidee Falanqaynta Xogta Weyn ay muhiim ugu noqotay DSPs
Falanqaynta xogta weyn waxay bud dhig u ahayd qorshayaasha suuqgeynta wax ku oolka ah iyo adtech muddo dhowr sano ah hadda laga joogo. Istaatistikada si ay u taageerto fikradda wax ku oolka gorfaynta xogta, waa jawi fudud oo laga soo jeediyo shirkaddaada dhexdeeda, oo laga yaabee inay xitaa kaa dhigeyso inaad u muuqato mid wanaagsan inaad tahay qofka kugula taliyay. Falanqaynta xogta weyn waxay baareysaa baaxad weyn oo xog ah (maadaama magaca uu tilmaami karo) waxayna u oggolaaneysaa baarayaasha inay adeegsadaan xogtaas